महाकाली नदीमा बहाव बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह - Kantipath.com
केही दिनदेखि लगातारको वर्षाले महाकाली नदी र अन्य खोलामा पानीको बहाव बढेपछि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । दार्चुलादेखि बैतडी हुँदै डडेल्धुरा–कञ्चनपुर बग्ने महाकाली नदीमा पानीको सतह बढेकाले सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेका हुन् ।
बैतडी, दार्चुला र कञ्चनपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महाकाली नदी आसपासका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । महाकालीमा पानीले खतरा सतह पार गरेकाले तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताए । “केही दिनदेखि लगातार रुपमा वर्षा भइरहेको छ”, उनले भने, “महाकालीमा पानीको बहाव घटबढ हुने भएकाले तटीय क्षेत्रमा नजान आग्रह छ ।”
महाकालीमा दार्चुलाको दत्तुमा राखिएको जल मापन केन्द्रमा जल सतहले खतराको सतह पार गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त नदीमा आज बिहान पानीको बहाव बढेर ५८० सेन्टिमिटर पुगेको दत्तु प्रहरी चौकीले जनाएको छ ।
Previous Previous post: वाग्मती सरकारद्वारा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
Next Next post: चुरेको गिट्टी, बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भेटवार्ता, घोषित निर्वाचन समयमै हुन्छ
नेपालले किन भने तपाई अश्रुग्यासको क्षेप्यास्त्र हान्ने, हामी बेहोस अनि ट्याँइँट्याँइँ फिस ?
यस्तो छ चीन, चेली र यौनधन्दाको चक्कर !
चीनमा पनि देखियो नयाँ प्रजातिको कोरोना
दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी
८ सेकेण्ड अगाडी